Utshintsho kwindlela ejongeka ngayo i-Wikipedia.org - MediaWiki
Utshintsho kwindlela ejongeka ngayo i-Wikipedia.org
This page is a translated version of the page Wikipedia.org updated page layout and the translation is 100% complete.
Utshintsho-lwe-Wikipedia.org iphepha-elipheleleyo-kweyeThupha2016 umfanekiso
UMBONISO - Utshintsho lokwakhiwa kwe-Wikipedia.org - umboniso kwimfonomfono
1 Into esinqwenela ukuyenza
2 Ingcinga ezikhuthaze olutshintsho
3 Lento izakunceda bani?
4 Uncedo ne-Mbethakalo
5 [indala]Into elandilayo edingwa leliqumrhu
6 Ii-draft zemiboniso yohlolo-lubini ulungaqulunqwanga
Into esinqwenela ukuyenza
Iqumrhu Lobhaqo lingathanda ukutshintsha iphepha lamasango Wikipedia.org libe lolunye uhlobo olutsha. Oluhlobo lutsha lucelwayo luzakuba noe-"dropdowm menu" yokubonisa iilwimi zaku-Wikipedia indaweni yokuzidwelisa, njengokuba zidwelisiwe ngoku. Olitshintsho lubonakala lulolona lunengqondo kubantu abakha lamasango, kodwa sifufuna ukubuza izimvo negcebiso kuluntu.
Ingcinga ezikhuthaze olutshintsho
Siye saqhuba uhlolo-lubini ulungaqulunqwanga kwinyanga yeSilimela ngo-2016. Luye lwabonisa ukuba abakhenkethi abaninzi banokucofa ezinye ii-link ezikwelophepha ukuba bayakwazi ukuzibona ngaphandle kokudinga ukuhl'benyuka. Eliqela lee-link eziku-'Ezinye' liquka ii-link zeminye imisebenzi ehlobeneyo etshintshiweyo.
Siye saluchaza uhlalutyo loluhlolo apha, ushwankathelo ulubalulekileyo luloluhlobo:
Enye yenjongo zequmrhu Lobhaqo kuMasango e-Wikipedia kukwenza u-Wikipedia.org abeyindawo ememayo. Into ibihlupha xa siyijonge ngamehlo umsebenzisi we-Wikipedia, ibibubukhulu bendawo enee-link ku-Wikipedia wazo zonke iilwimi ezahlukeneyo. Besinexhala lokuba ingangumthamo omkhulu kubasebenzisi abafika be-Wikipedia. Sicebisa ukutshintsha indlela eyakhiwe ngayo apho lendawo izakubakho kubantu abayifunayo futhi yakhiwe ngokucocekileyo nangendlela yodweliso.
Siqhube uhlolo-lubini olungaqulunqwanga lweveki kuba sifuna ukubona indima edlalwe lolutshintsho, ukuqala nge-6 ukuyokutsho nge-14 kweyeSilimela kunyaka ka-2016. Iqela ilihloliweyo belinamalungu ayi-3019 yabasebenzisi bale itshintshiweyo ngelixa eqela labasebenzisi bale ingatshintshwanga bebeyi-2560.
Sifumene ukuba iqela leliphepha linotshintsho libenomdla oyi-3.64% ubuninzi wokusebenzisa eliphpha futhi benamatyeli angu-1.07 okusebenzisa eliphephe kuneliqela linganatshintsho. Nangona amaqela omabini ayifumene i-link enelwimi, abasenzisi beliqela lephepha elinotshintsho i-6.82% ibonise umdla wokundwendwela i-Wikipedia engolwimi abalithandayo kunelinye iqela eli (Ityeli elingu-1.09 ubuninzi).
Ezona njongozethu zolutshintsho yakukuhlisa izinga lokuy'umva (sinyuse izinga lokuyisebenzisa). Sibone utshintsho oluninzi kwindlela abantu abalisebenzisa ngalo eliphepha xa benikwe ecolileyo, lonto ichaza ukuthi masiqhubeke nolutshintsho.
Siliyeke iphapaha linjanlo - thuba lelwimi ezidweliswe ngoninzi lopapasho lwazo kwi-dropdown. Lonto yenzela ukuthi abahleli abaqhelileyo bakwazi ukubona ukuba ulwimi abaluthandayo lundawoni kwizibalo zopapasho.
Lento izakunceda bani?
Abantu abazakuncedakala kakhulu ngabanto abandwendwela iphephe lamasango e-Wikipedia, ingakumbu abo basebenzisa ifowuni. Njengokuba izinga lokusetyenziswa kwefowuni linyuka kwilizwe jikelele ntsuku nantsuku, sifuna ukubanephepha elilula ukulisebenzisela lento ifunwa ngabasebenzisi: Ukuphengulula, ukukhetha olunye ulwimi okanye ukundwendwela omnye umsebenzi ohlobene ne-Wikipedia.
Imisebenzi ehlobeneyo ibonakala kakhulu
Kuzabanzima (ngokudingeka ukuba ucofe enye into) ukuzibona zonke iilwimi ezidweliswe ngobuninzi bopapasho
[indala]Into elandilayo edingwa leliqumrhu
Ixesha lezimvo zenu LIPHELILE! Enkosi ngengcebiso nentlomlo zenu!
Singathanda ukuba uluntu olunomdla lusinike izimvo kutshintsho lwephepha losango lika-Wikipedia. Sicinga lutshintsho oluhle kakhulu kwiphepha esilisebenzisayo nesilithanda, kodwa sifuna ukuqiniseka ukuba abanye abantu bacinga njalo nabo.
Okuninzi ngosango le-Wikipedia kufuneka apha nodweliso lweentlolo-mbini ezingaqulunqwanga ezinziweyo.
Inkqubo yomsebenzi wange-14 kweyeKhala, 2016 Sisandokugqiba uphenyo lolugalelo ngokuthetha nabathathi nkxaxhebo kwimibuzo ngezimvo zabo, funda yonke apha
Ii-draft zemiboniso yohlolo-lubini ulungaqulunqwanga
Iilwimi ngobuninzi bopapasho kwikhompuyutha
Usango lwe-Wikipedia - i-dropdown yeelwimi kwikhompuyutha
Usango lwe-Wikipedia - uhlolo lokuwa kwemipapasho ngeelwimi, umboniso kwifowuni phambi kokucofa iqhosha
Usango lwe-Wikipedia - uhlolo lokuwa kwemipapasho ngeelwimi, umboniso kwifowuni emva kokucofa iqhosha
Iqhosha lezinye iilwimi kusango le-Wikipedia.org
Retrieved from "https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Wikipedia.org_updated_page_layout/xh&oldid=3893097"
This page was last edited on 3 June 2020, at 21:07.